Umaki: umsindo wezenhlalo | Martech Zone
Umaki: umsindo wezenhlalo
Lokhu kungenye ye-infographic enhle evela ku-CJG Digital Marketing, ama-10 Social Media Marketing Trends Wokubuka Lo 2015. Kubalulekile ukubuyekeza okuqukethwe kwakho, amasu ezenhlalo nawamaselula ukukhomba lapho ungahle ube khona izikhala ezithile. Izindlela ezi-10 Zezentengiso Zezenhlalo zokubuka lokhu Ukukhangiswa kokuqukethwe kuka-2015 ziyaqhubeka nokuthola ezenhlalo. I-Real Time Social Media Marketing izoba ngundabamlonyeni. Umsindo nevidiyo kuzobusa okuqukethwe komphakathi. Kukhona ukuqhubeka okuqhubekayo, okungaguquki